Waxaad wadaa baabuur shakhsiyeed oo uu ku xidhanyahay buudhi fudud. Buudhiga wuxuu leeyahay biriigyo. Waa maxay xawaaraha ugu sareeya ee la ogolyahay inaad ku socoto?
Waxaad ka gudbaysaa oo sii dhaafaysaa isgoyskan adigoo toos u soconaya. Dhinacee bay tahay inaad eegto hortaba sida caadiga ah?
Dhinaca midig, maadaama xeerka midigtu uu shaqaynayo halkan.
Dhinaca bidix, maadaama baabuurta dhinacan ka imaanyasaayi ii dhawdahay